Maqaal:Maxuu Salka Ku Hayaa Dib u dhaca ku yimid Shirka Wadatashiga Muqdisho -
HomeArimaha bulshadaMaqaal:Maxuu Salka Ku Hayaa Dib u dhaca ku yimid Shirka Wadatashiga Muqdisho
Maqaal:Maxuu Salka Ku Hayaa Dib u dhaca ku yimid Shirka Wadatashiga Muqdisho
January 10, 2018 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
ujeeddooyinka ugu waaweyn ee shirka ay ahaayeen soo bandhigista qorshayaal horumarineed oo uu maamulka gobolku ku mashquulsanaa lixdii bolood ee la soo dhaafay iyo ka tashiga meeqaamka Muqdisho iyo halka ay ka galeyso nidaamka Federaalka ah ee dalka taa oo ku xiran ammaanka caasimadda oo faraha ka sii baxayay inta ay dowladdani jirtay.
Gobolka Banaadir ayaa dhowr jeer oo hore codasaday in hay’adaha ammaanka gobolka la hoos keeno maamulka balse siyaasyiin madaxtooyada ku dhaw dhaw ay arrinkaasi hor istaageen.
Xog lagu kalsoonaan karo ayaa sheegeysa in Ra’iisul Wasaaruhu uu ku amaray Guddoomiyaha gobolka Banaadir in shirka la baajiyo.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo iminka la kulmaya cadaadis dhanka madaxda sare ah ayaa loo sheegay in madaxweynaha oo maqan aysan habbooneyn in shirkaasi la qabto, balse waxa la fahansan yahay in arrinku uusan ku xirneyn soo laabasahda Madaxweynaha iyo joogitaankiisa ee uu xiriir toos ah la leeyahay arrimo siyaasadeed.
Dowladda Federaalka ah muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wajaheysay mucaarado xooggan oo xukuumadda bannaanka ka ah oo sababtay in awood ciidan ay u adeegsato balse khilaafka xukuumadda gudaheeda ah bannaanka uma uusan soo bixin, hase ahaate haddii khilaafka Taabid iyo Kheyre aan si hoose loo xallin waxa uu sii hurin karaa mucaaraddada jirta, gaar ahaan tan siyaasiyiinta beelaha Muqdisho ah kuwa uu xeer ilaaliyaha ku soo oogay dacwadaha qaran dumisnimo. iyo Xil ka qaadis Dad Si Gooni ah Loo Beegsnayo.